Mahavariana ny siansa momba ny loko, raha ny fahitako azy. Mpamorona tsara - na fiara, mpamorona haingon-trano, mpamorona sary, na mpamorona mpikirakira mpampiasa aza dia mahatakatra ny fahasarotan'ireo loko sy ny maha-zava-dehibe azy ireo. Avy amin'ny paleta loko voafantina hahazoana antoka fa manome firindrana - amin'ny tena loko ampiasaina - dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fitondran-tenan'ny mpampiasa.
Color mampitombo ny fanekena marika amin'ny 80%, mitarika mivantana amin'ny fahatokisan'ny mpanjifa. Ity misy fiantraikany amin'ny mpanjifa amerikanina ny loko: